Blockchain News 12 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 12, 2018 arun
Blockchain News 12 Ndira 2018
Chinese kutsvaka Injini Baidu anotangazve Blockchain-se-a-basa pakakwirira
Chinese dandemutande kutsvaka hofori Baidu wakatanga kurwisa yayo blockchain-se-a-basa (BaaS) dandara.
Kwakavakirwa zvemichina yakataurwa Baidu, hayo kuchikuva anotanga kupa kupfuura “mushandisi-ushamwari” blockchain basa.
Maererano akasimba wacho vakazvitsaurira Website, “Baidu Trust” rinobvumira achitungamirira uye Kuongororwa kuti kwema, uye zvinogona kushandiswa siyana kushandiswa nyaya, kusanganisira digitaalinen mari, digitaalinen Billing, bhangi chikwereti utariri, inishuwarenzi utariri zvemari Auditing, uye zvakawanda.
US hurumende siyana kushanda boka nezvezvandaifanira cryptocurrencies
US Treasury Secretary Steven Mnuchin akati musi weChishanu kuti Financial kutsiga Kwakavandudzwa Council, muviri hurumende Anoongorora dzemari hurongwa ngozi, akaumba mumwe kushanda boka nezvezvandaifanira cryptocurrencies.
Mnuchin vakataura pamusoro muitiro panguva nechitarisiko pa The Economic Club mu Washington, D.C. pashure pokunge akabvunza pamusoro nyaya bitcoin.
“Tiri chaizvo nezvezvandaifanira cryptocurrencies,” Mnuchin akatsanangura, hunotaura kukurukurirana nevamwe regulators mukati U.S. hurumende uye gare gare kutaura: “Tinoda kuva nechokwadi chokuti vanhu vakaipa havagoni kushandisa mari izvi kuita zvinhu zvakaipa.”
Mnuchin akawedzera kuti nyaya yakanga mumwe kuti U.S. hurumende kuti kuita pamwe G-20 remarudzi boka uyewo.
Mnuchin paakabvunzwa kana Federal Reserve chinowanzoitika kutanga kwayo digitaalinen shanduro pachedu Fiat mari.
“The Fed I uye musafunga pane kudikanwa kuti panguva ino,” Mnuchin akati.
ReRussia Sberbank inozivisa blockchain yezvirwere
Sberbank, mumwe pamahombekombe pakukura Russia, akazivisa munhu blockchain rabhoritari kutanga uye bvunzo blockchain anotsanangura mhinduro.
The yezvirwere itsva ndehwokuti vaunze chigadzirwa prototypes, kuita mutyairi miedzo uye dhipuroya blockchain anotsanangura mabhizimisi negadziriso Sberbank Group, mumwe mupepanhau inoti.
Maererano Igor Bulantsev, Sberbank kuti mukuru mutevedzeri womutungamiriri, blockchain anogona kubatsira “reshaping” mari bhizimisi pamusika, uyewo mabasa kubhengi uye mabasa.
Blockchain zvemagetsi siginicha bhiri dzichitaurwa muna Tennessee
Muiti wemitemo muna Tennessee yave nyaya bhiri itsva kuti anoona blockchain vakasaina sezvo pamutemo yemagetsi zvinyorwa, wokupemberera ichangoburwa zvemitemo kuedza kuita kudaro ichangopfuura mavhiki.
The bhiri, kuzviisa pasi Tennessee House of Representatives neHurumende wemitemo Jason Powell musi Jan. 10, anotaurawo zvakafanana nhindi mitemo kudare muFlorida uye Nebraska.
Asi sezvo pamwe nokuedza mu Florida uye Nebraska, zvazvinosarira kuonekwa sei nevamwe vanoita zvemitemo vanoita sezvinoita zviyero kufamba kuburikidza gakava muitiro.
Online bhangi Swissquote akawedzera pazviri kwakaita haibatsiri maonero nokuda Bitcoin wokutengesera
Online bhangi Swissquote yakadzokororwa ayo mubereko riro 2017, wakati vakabatsirwa simba wokuita zvemusika cryptocurrencies. The kambani yave swamped kufarira nokuda bitcoin wokutengesera.
Shwanu-kwakavakirwa Swissquote anotarisira zvakaoma kuti totaled 186 miriyoni mafranc Swiss mu 2018, 8 miriyoni kupfuura akanga kunotarisirwa kwaro kushurudzira kupfuura ichangopfuura. Mubhengi akati zvichava kuposita munhu pretax purofiti vanenge 45 miriyoni mafranc, maererano mutsara kusunungurwa nhasi.
The unopinza kuwedzera zvakaoma uye mubereko kukura kwakanga pamusana zviviri, Swissquote akati.
Vatengi vaitengerana yekudyidzana yakawanda kuchengetedzeka uye vatorwa Exchange, apo kambani zvakare kuwana purofiti pakatanga cryptocurrency wokutengesera.
Swissquote aiva wokutanga European paIndaneti kubhangi nokuparura chipo chakadaro muna July, 2017.
MuJapan DMM Group anotangazve Bitcoin Exchange
DMM Group, mumwe Japan-kwakavakirwa eCommerce uye Indaneti kunhaka kambani iri nezvekutanga mumwe mukutsinhana idzva rinonzi DMM Bitcoin.
The kambani iri kuronga pamusoro chinopiswa 24/7 kasitoma rutsigiro, uye pari ari Newest yaidzorwa Bitcoin Exchange Japan.
The zvakasimba riri pamutemo kuva 'rakapotsa mari muzvinashawo’ ari Japanese Finance Bureau
How Cryptocurrency M ...
Square anogamuchira New ...
Chii Unboxed Netw ...
Previous Post:Bitcoin Hardforks chii?
Next Post:Blockchain News 13 Ndira 2018